पार्वतीको जन्मथलो पाङ अब ‘पार्वतीधाम’ « News of Nepal
जनकपुत्री सिताको जन्मथलो जनकपुर जस्तै माता पार्वतीको जन्मथलोको रुपमा रहेको पर्वतको पाङलाई ‘पार्वतीधाम’ को रुपमा बिकास गरिने भएको छ ।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नं १ पाङमा हिमालयकी पुत्री पार्वती जन्मेको बिश्वास गरिएका कारण पर्वती जन्मेको ठाउँ, तपस्या गरेको पार्वती गुफा र पार्वती खेल्ने पार्वतीचौर लगायतका क्षेत्र समाबेश गरि ‘पार्वतीधाम’ को रुपमा बिकास गर्न लागिएको हो ।
पार्वती ध्यानमा बस्ने गरेको पार्वती गुफा, स्नान गर्ने गरेको सहस्र धारा, खेल्ने गरेको मैदानलगायतका ठाउँ पाङमै रहेकाले यसको प्रचारप्रसार गर्न सभा आयोजना गरिएको आयोजकले बताएका छन । पार्वती पाङमै जन्मिएकी हुन् भन्ने पुराणमा समेत उल्लेख भएका कारण यसको बिकास गर्न अभियान थालिएको कुस्मा नगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष देबेन्द्र सुबेदीले जानकारी दिनुभयो ।
‘गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, सिताको जन्मस्थल जनकपुर जस्तै पार्वतीको जन्मस्थल पर्वतलाई पनि धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन आवश्यक भएकाले अभियान शुरु गरिएको हो।’ अध्यक्ष सुबेदीले भन्नुभयो ‘सबै धार्मिक, ऐतिहासिक र भौतिक तथ्यहरु राखेर यसको प्रचारप्रसारमा जुटेका छौ।’
माता पार्वती जन्मिएको विश्वास गरिएको पार्वतको पाङलाई पार्वती धामको रुपमा बिकास गर्न संस्कृतिबिद् सहितको उपस्थितिमा शनिबार बृहत छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । माता पार्वतीको कथा स्वस्थानी ब्रतकथा संग पनि जोडिएका कारण स्वास्थानी पुर्णिमाको दिन पारेर अन्तरकृया भएको थियो । अन्तरकृामा सभामा संस्कृतिविद् तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङ, बिश्वहिन्दु महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, पाङका बारेमा खोज अनुसन्धानकर्ता डा. षडानन्द पौडेलको उपस्थिति थियो ।
पाङमा फेला परेका विभिन्न पुरातात्विक वस्तुहरुले पार्वती पाङमै जन्मिएको भन्ने कुरा पुष्टि गर्नमा सघाउने उपकुलपति डा. गुरुङ्गले बताउनुभयो । उहाँले पाङमा नै माटोको माला र ढुङ्गाको सियो फेला परेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसको रेकर्ड पुरातत्व विभागमा छैन। संग्रहालय बनाएर ती सामग्री राखिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘गुफामा भेटिएका विभिन्न सामग्रीहरुबारे पुरातत्व विभागमा जानकारी गराएर अनुसन्धान गर्न लगाएमा यस ठाउँको प्रवद्र्धन हुनेछ।’
गुफामा भेटिएको प्राचीन मूर्ति प्रस्ट रुपमा महिलाको भएको र त्यो पार्वतीकै हो भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार पनि रहेको बिश्वास धेरैको छ । पाङलाई पार्वती धामको रुपमा विकास गर्न सकेमा नेपालबाहिरका मान्छे समेत सहस्र धारा र पार्वती गुफामा साधना गर्न आउने बिश्वास पनि लिइएको छ ।
मुक्तिनाथ प्रबेशगर्ने स्थल समेत भएका कारण पाङ, पार्वतीगुफा तथा गुप्तेश्वरको धार्मिक महत्वका बारेमा बुझाउनका लागि दुई बर्षअघि कुस्मामा महायज्ञ लगाइएको थियो । उक्त महायज्ञमा संकलन भएको रकम र संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा बिश्वकै अग्लो शिब र पार्वतीको मुक्ति स्थापना गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । गुप्तेश्वर पाङलाई जोडेर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्ने प्रयास भैरहेको गुप्तेश्वर धार्मिक तथा पर्यटकीय अभियानका संयोजक पृथ्वीनारायण शर्माले बताउनुभयो ।